CO2 Laser Kucheka achiita zvokutemera Machine Vagadziri | China CO2 Laser Kucheka Kutema Muchina Vatengesi & Fekitori
1390 Simbi Uye Isina Kuumbwa CO2 Laser Engraver Uye Yakacheka
Muenzaniso Nha .: KCL1390X
KCL1390X CO2 Laser kucheka achiita zvokutemera muchina kunogona kutema acrylic, huni, MDF, plywood, dehwe, jira uye PVC mapurasitiki nezvimwewo, zvakare zvinogona kunyorera pagirazi, acrylic, huni uye zvimwe zvisingaenzaniswi.
1390 1610 100W 150W CO2 Laser Kucheka Uye Kucheka Machine
1325 Simbi Uye Isingagumi CO2 Laser Kutema Muchina
Muenzaniso Nha .: KCL1325XM
KCL1325XM simbi uye isingaenzaniswi CO2 laser yekucheka muchina ine simba rakasiyana, 150W inogona kutema max1.5mm kabhoni simbi nesimbi, 1.2mm simbi isina simbi, 20mm acrylic uye 12mm huni nezvimwewo, zvakare inogona kunyorera pagirazi, acrylic, huni uye zvimwe zvisina kuenderana; 300W inogona kutema max 3mm kabhoni simbi nesimbi, 2mm simbi isina simbi, 30mm acrylic uye 20mm huni, MDF nezvimwewo, zvakare inogona kunyora pane isiri-simbi.
Small Portable Wood Acrylic CO2 Laser Kucheka achiita zvokutemera Machine
Muenzaniso Nha .: KCL6090X
KCL6090X Diki CO2 laser yekucheka yekuveza muchina inogona kutema acrylic, huni, MDF, plywood, dehwe, jira uye PVC mapurasitiki nezvimwewo, zvakare inogona kunyora pagirazi, acrylic, huni uye zvimwe zvisina kuenderana. Kucheka kana kunyora nzvimbo ndeye 600 * 900mm kana 600 * 1000mm.